Appeal to recently released General Khin Nyunt | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “စာကုသိုလ်” ကျနော်တို့ အသက်တစ်ခါလွှတ် ခင်ဗျား ဆယ်ခါလွတ်ပါစေ
Muslim youths in Myanmar should be trained to be competitive in corporate world »
Maungmaung Skw wrote on his FB wall: ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် လွတ်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။အထဲမှာ ၆နှစ်လောက်နေခဲ့ ပြီးပြီဆိုတော့-စဉ်းစားတွေးတောချိန် အများကြီး ရခဲ့မှာပါ-သူဟာ တပ်အတွက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်-တပ်ကသူဘက်မှာမရှိဘူး-ပြည်သူ့အတွက်လုပ်ကြည့်ပါလား-ပြည်သူက သူ့ဘက်မှာရှိမှာ အသေအခြာဘဲ-စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့-အချိန်တွေအများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်-အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက် တိုင်းပြည်မှာ နေရာတွေရှိပါတယ်။မိမိဘ၀ နေ၀င်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်-အများအတွက်-ပြည်သူအတွက်-အကျိုးရှိတာတွေ လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။လူတစ်စုအတွက်လုပ်ခဲ့မိလို့-အဲ့ဒီလူတစ်စုကဘဲ-ကျေးဇူးဆပ်တာ ခံယူပြီးပြီဆိုတော့-ပညာရှိတစ်ယောက်ဘဲ-သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။
I am afraid of ONE thing only. During his time in MI, there werealot of Anti-Muslim Riots and once the MIs were arrested almost all of them stopped. Even if he could not clarify, it may be amounted to self incrimination, he should not resort to that bad practice or should refrain from advising to the relevant authorities to try his old tested divide and rule policy. Singapore’s Mr Lee Kwan Yew had singled him out as clever general amongst the rest of the Dumb Myanmar Generals.
Tags: Asia, Buddhism, Burma, Business and Economy, Khin Nyunt, Lee Kuan Yew, Muslim, Myanmar
This entry was posted on January 13, 2012 at 11:16 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “Appeal to recently released General Khin Nyunt”
January 13, 2012 at 11:57 am | Reply
တာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘာတတ်နိုင်မှာလည်း ကြုံသလို ရှင်းကြ
ယုံပေါ့။ဒီခေတ် ဒီအခါကိုက လူတိုင်း
ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း အမြဲလုပ်နေ
ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု-အလ္လာဟ် ဆိုတဲ့ ကိုး
January 13, 2012 at 12:18 pm | Reply
Ni Lynn also commented: ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လွတ်လာတာ လူတယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းသာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မကင်းရာမကင်းကြောင်း အဆက်အနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ 7Days၊Voice၊ Eleven အားလုံး မင်းကိုနိုင်၊ခွန်တွန်းဦးတို့နဲ့တတန်းတည်းထား အမွှန်းတင်နေတာသိပ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်၊”
January 14, 2012 at 2:05 pm | Reply
ခင် ရတနာ wrote on her FB:
မှန်လုိုက်တာ ကုိုကုိုကြီးရယ်….ထောက်လှ​မ်းရေးလက်ထက်မှာ မွတ်ဆလင် ဗုဒ္ဒဘာသာ အရေးအခင်းတွေ အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ။ အဓိက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့နေရာတွေက​ မန္တလေး။ ပြည်။ ဟင်္သာတ။ တောင်ငူ ပဲခူး ကျောက်ဆည် စတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်။ ထောက်လှမ်းရေးအားအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ ခုဆုို ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲကြီး ပြိုကွဲပီးကထဲက အဲသလုို မွတ်ဆလင် ဗုဒ္ဒဘာသာ အရေးအခင်းတွေ မရှိတော့တာ။ ဘာသာရေး အရေးအခင်း ဖန်တီးတဲ့နည်းနဲ့ ခင်ညွန့်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးသက်ဆုိုးရှ​ည်အောင် လုပ်ခဲ့တာ။ တုိုင်းပြည်မငြိမ်သေးလုို့ စစ်အစိုးရဆက်ပီး အုပ်ချုပ်ရပါတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ခင်ညွန့်ဟာ သန်းရွှေနဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆုို့ဖြစ်တယ်။ ခင်ညွန့်ယုတ်မာပုံတွေကုို​ ရသလောက် ဖော်ထုတ်ကြ။ သမုိုင်းတရားခံကုို မိးမောင်းထုိုးထားကြ။
ခင် ရတနာ… ပုိုပီးထူးခြားတာက အဲဒီခေတ်ကာလ မွတ်ဆလင် ဗုဒ္ဒဘာသာ အရေးအခင်းတခုဖြစ်တုိုင်း သီတဂူဆရာတော်ခေါ် သဲကုန်း ဦးဥာဏိသရ ပျောက်နေတယ်။ (သက်သေပြနုိုင်တယ်)။
အရေးအခင်းပြီးရင် အစိုးရကုို ချိတ်တိတ်တိတ်ဟောတဲ့ ကက်ဆက်တရားခွေ
ဒါပေမဲ့ သူ့ကုို ထောက်လှမ်းရေးက ဘယ်တော့မှ မဖမ်းဘူး။
စစ်အစိုးရခေတ်မှာ ထောက်လှမ်းရေးခုိုင်းတာ သီတဂူဆရာတော် အကုန်လုပ်တယ်။(အများကြီး သက်သေပြနုိုင်တယ်)
[…] Appeal to recently released General Khin Nyunt (drkokogyi.wordpress.com) […]